Ukuphuculwa kwesicelo seWebhu kunye neSelfowuni
Hlala inyathelo eliPhambili rhoqo!
Kukhawulezisa eyakho Inguqu Digital uhambo nge NewGenApps
Ukunikezela ngeenkonzo ezininzi
Besisoloko sichonga i-megatrends kwangoko, iselfowuni, ilifu, idatha enkulu, i-AI / ML, iBlockchain, ukuFunda okunzulu, i-NoSQL, i-IoT, ii-IIoT Analytics kunye ne-Insights, i-GraphQL, iziqulathi, iiKubernetes, kunye nabanye ukubiza ezinye ezininzi. Bambalwa kakhulu abayenzileyo ngesantya nakwinqanaba njengathi!
Khawufane ucinge indlu yakho ithetha nawe okanye emotweni yakho. Umnyango uthetha ngokutshintsha kwesibane. Kakhulu! Akunjalo?
Siphuhlisa uluhlu lweeapps zeWebhu ezinokusombulula iingxaki ezahlukeneyo ngokufanelekileyo ngokwemfuno.
I-iPhone, i-iPad, i-Android, iFacebook kunye nokwenza iiGoogle zokusebenza uphuhliso lwesicelo
Kukhulu phantse kuwo onke amacandelo nokuba kukhathalelo lwempilo, imfundo, ezemali, imveliso, njl.
I-ML sisiqhelo sohlalutyo lwedatha olwenza ngoomatshini ukwakhiwa kwemodeli yohlalutyo.
UKUSETYENZISWA KOLWIMI LWENDALO
Icandelo le Kukubhadla okungeyonyani ijongene nokuvelisa, ukuqonda kunye nokuhlalutya iilwimi.
Ukufumanisa ubuqhetseba, ukuNcitshiswa kweNdleko kunye nokuNikezelwa okuSebenzayo ngoncedo luka Big Uhlalutyo lweedatha.
Ukunikela Ukufuduka kwamafu Iinkonzo, iiNkonzo zokuHamba kwamafu kunye ne-IaaS / PaaS.
Ukunxibelelana nendalo yedijithali yokwenyani kunye nokwenza nokulinganisa okwenyani kobomi
Yenza imeko enjalo ngaphakathi kwesicelo esixubekayo kunye nemixholo yehlabathi yokwenyani.
Yandisa intengiso, Yandisa izinga lokuphendula kwephulo, Nciphisa ukuchitha imali.
IINKONZO ZE-AMAZON WEBHU
IiNkonzo zeWebhu zeAmazon, zibonelela ngeQonga leeNkonzo zeLifu.
Inzululwazi yedatha kunye nezibalo ezakha amanyathelo ehlabathi elikungqongileyo ukufumana ulwazi olunentsingiselo kwimikhwa kunye nokunxibelelana. Isihloko somdla omkhulu ngokwanda kwe- enkulu Uhlalutyo lwedatha izixhobo ezinika amandla okwakha iipateni ukusuka kwisixa solwazi olungacwangciswanga.
basemoyeni bubukrelekrele obonakaliswe ngoomatshini, ngokungafaniyo nobukrelekrele bendalo obonakaliswe ngabantu nakwizilwanyana, obandakanya ukuqonda kunye neemvakalelo. Ukwahlula phakathi kweendidi zangaphambili kunye nezokugqibela zihlala zibonakaliswa sisigama esikhethiweyo.
Isifundo se-algorithms zekhompyuter eziphucula ngokuzenzekelayo ngamava kunye nokusetyenziswa kwedatha. Iialgorithms zisetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo, ezinje ngokuhluza i-imeyile kunye nombono wekhompyuter, apho kunzima okanye kungenakwenzeka ukuphuhlisa ii-algorithms eziqhelekileyo zokwenza imisebenzi.
Imithombo yeendaba kwezentlalo ibonelela ngeqonga elihle lokuba iingcali zinxibelelane nabaphulaphuli babo kunye nabaxhasi. Ngokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kunye nobuchule kwezentlalo, unokukhulisa oku kulandelayo kwaye ube ngumzi mveliso ofanelekileyo.
Enye yeetekhnoloji ezibaluleke kakhulu kule minyaka ilishumi yile Ukhomyutha yamafu. Amafu enza ukuba amashishini abonelele ngeenkonzo ezahlukeneyo kwimfuno, kwaye avumele abasebenzisi be-intanethi ukuba bafikelele kwezi nkonzo ngaphandle kokuthenga iihardware ezintsha.
Izixhobo zokuthengisa zinokulandela umkhondo wenkqubela phambili yakho kunye nokubonelela ngemilinganiselo yokuphendula ekuvumela ukuba uvelise imveliso. Ngokuzenzekelayo izikripthi zakho, unokonyusa isantya ovala ngaso amadili. Qiniseka ukuba umbhobho wakho uzenzekelayo, kwaye ujonge rhoqo.
I-blockchain yitekhnoloji yohlaziyo enokwenza ukuba ukuthengiselana kube lula kwaye kukhuseleke ngakumbi. Okwangoku, inqanaba abantu abathenga ngalo kwi-Intanethi liyakhula, kwaye oku kukhokelele ekunyukeni kwe-bots kunye nogaxekile kwiiwebhusayithi.
INKQUBO YENKQUBO YOKUGQIBELA
Ukuzenzekelayo kwemisebenzi esekwe kumgaqo kunye nokusetyenziswa kwezisombululo zesoftware ephucukileyo ukunciphisa ukuxhomekeka kwabantu emsebenzini wesiqhelo. Ukulawulwa kwedatha kwii-CRM, ii-ERPs, iNkxaso yaBathengi ngaphandle kolawulo.
Ukulawula ishishini lobuchwephesha ngenkqubo enexabiso eliphezulu, iingxoxo ziingxoxo ezinengqondo zokunxibelelana nabantu. Sithatha izinto njengenyathelo eliphambili ngokuphuhlisa i-bots, eyilelwe ngokukodwa onke amashishini.
yethu iprojekthi Iimbalasane
Sakha kwaye siphuhlisela ukusebenza, ukuhlala kunye nonxibelelwano. Sithatha iiprojekthi ngenjongo yokufumana isisombululo, isisombululo esitsha kwiingxaki, ezinkulu nezincinci.
yethu umbilini Iimilinganiselo
Imilinganiselo esiyibambe ukwenza isiseko esisebenza kuso kunye nokuziphatha kwethu.
Sikholelwa ekubeni nemigaqo yokuziphatha efanelekileyo kunye nokwenza izinto ezilungileyo, nokuba ngubani na obukeleyo.
Umntu onomdla ukhuthazwa ukuba enze izinto ezintsha. Ukuba uthatha inyathelo lokuqala, ukulungele ukwenza izinto wedwa.
Uhambo lophuhliso oluqinisekileyo lomntu ngamnye kunye nokuphucula ubuchwephesha kunye nangokobuqu.
Ukuba unenjongo yokwenza into, uzimisele ukuyenza. Ukuba unenjongo, unenjongo okanye injongo.
Ukufezekisa izimvo ezintsha, iipateni ezintsha kunye nokucinga okuyilayo ukuphucula indlela ezenziwa ngayo izinto ngokubanzi.
Kuthi, ayingomsebenzi nje-siyazingca ngezisombululo esizizisayo kwaye sanelisekanga de iiprojekthi zifezekise imigangatho yethu ephezulu.
Sisoloko sizama ukugqitha kulindelo lwabathengi bethu kwaye sakhe ubudlelwane obuhlala ixesha elide kunye nabo.
Sine-900 + isiseko esomeleleyo sabathengi.
Abanye babathengi bethu esiqale ukusebenza nabo ngo-2008 basasebenza nathi, ii -apps zabo zibonise amaxesha amaninzi kwiiVenkile ze App nakwiGoogle Play, iibhloko kunye neemagazini.
Ngokomndilili, sine-80% yokuphinda ishishini.
Siphuhlise ii -apps zeselfowuni ukusukela oko i-iOS kunye ne-Android zakhutshwa kuqala kubaphuhlisi ngo-2008.
Sineqela elinamava leengcali zeshishini ezinokuthi zilitshintshe kwakhona ishishini lakho ukusuka phambili ngobuchwephesha obutsha kunye neendlela zokusebenza.
Sizise usetyenziso olunzima ngokunjalo izisombululo zefu eyayifuna ubuchule besizinda.
ENYE STOP SHOP
Sinikezela ngeenkonzo ezininzi ukusuka kuyilo, iapp ephathwayo (yemveli, iqonga elinqamlezayo), uphuhliso lwewebhusayithi kunye izisombululo zefu ukuze ungajongi amaqela ahlukeneyo kwenye indawo. Khumbula:
Sineengcali zemibandela yezihloko (ii-SMEs) ezikhethekileyo kubuchwepheshe bazo.
Sikwabonelela ukhomyutha yamafu ngeeNkonzo zeWebhu zeAmazon (AWS) ukubonelela ngezisombululo ezisekwe kwilifu elithembekileyo kuzo zonke iimfuno zakho zeshishini.
Sityala imali kwi t yethuIsiseko solwazi kubasebenzi bethu ukuze bahlale phambili kweemfuno zetalente ngokusebenzisa iinkqubo zovavanyo oluqhubekayo.
Siwajonga ngokucokisekileyo amalungu eqela lethu ngelixa sibafuna.
Iqela lethu liya rhoqo kwiinkomfa zabaphuhlisi (njengeWWDC).
Sizigcina sihlaziywa ngenkqubela phambili yetekhnoloji esisebenza kuyo.
Siyaqonda ukuba utyalomali alunayo i-ROI eyakhayo emva koko utyalo-mali akufuneki lwenziwe.
Umgangatho ophezulu, isisombululo esinexabiso eliphantsi sisebenzisa imodeli ye-offshore.
Ixesha elikhawulezayo lokuthengisa.
Ukusetyenziswa kweetemplate ezinobunkunkqele kuyaqinisekisa ukuba sidala iimeko zokuphumelela kwaye ufumana iRoI ephezulu.
Silandela iprojekthi ye-agile kunye neguquguqukayo yomjikelo wobomi ukunceda iqela lethu ukuba liphendule ekungalindelweni ngenxa yokurhoxa rhoqo.
Sinokuziqhelanisa notshintsho kunye nenqanaba eliphezulu lentsebenziswano.
Ukuba usisiqalo kwaye ufuna ukubona ukuba imveliso yakho iguquka njani kwinqanaba ngalinye, uya kuba usendaweni elungileyo. Ungagcina umkhondo weprodct yakho kuwo onke amabakala ophuhliso lwayo.
Ezona zisombululo zilungileyo kwiifayile zakho ishishini
Ndonwabe kakhulu ngeprojekthi yam nge NewGenApps. Iqela libalasele. Ukuphendula kakhulu kwaye unomdla. Babuza imibuzo ebalulekileyo kwaye banike iingcebiso ezigqwesileyo ngaphandle komxholo. Ndihlala ndisazi ukuba ndisezandleni ezilungileyo kwaye ndizakufumana kanye le nto ndiyicelileyo- okanye ngcono. Unxibelelwano, kude, NewGenApps Eyona asethi inkulu. Bendihlala ndikwazi ukufumana impendulo ecacileyo kunye nokuthetha kwangoko. Zange khe ndilinde okanye ndihluthe impendulo- yayihlala isiza kwangoko. Iqela linomsebenzi omangalisayo kwaye liyabakhathalela abathengi. Ndiceba ukwenza umsebenzi ongaphezulu NewGenApps, Kwaye ucebise ukuba nabani na owakha usetyenziso enze okufanayo. Iqela eloyikekayo evelisa umsebenzi osemgangathweni. Ndiza kuhlala ndijonga kwi-NGA kuqala kuyo nayiphi na iprojekthi.
Imithombo yeendaba eKakashik
Newgenapps wenze umsebenzi omangalisayo kwiprojekthi yam. Iqela lihambe umgama ongaphezulu kuzo zonke iindawo! Ubungcali babo, izakhono ezinzulu zobugcisa, izakhono ezinkulu zombutho, unxibelelwano olukhulu kunye nokulawulwa kweqela elinamava lenze ukuba le projekthi ibe yimpumelelo. Yonke into isuka kwisindululo ukuya ekugqibeleni ukuhanjiswa - Newgenapps waluphelisa ukhuphiswano. Xa imiceli mngeni yobuchwephesha ivelayo, iqela lakhawuleza lachonga iindlela zokusombulula emva koko lazazisa ngokucacileyo neqela lethu ukuba lithathe isigqibo ngeyona ndlela ifanelekileyo. Newgenapps ikwangabafundisi-ntsapho abakhulu kwimimandla esasinamava kuyo - sihamba ngokwenkqubo efunekayo kunye namanyathelo okwenza umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Le yinkampani onokwakha ubudlelwane obude kunye nayo. Ngokuqinisekileyo siyabacebisa kwaye sijonge phambili ekusebenzeni nayo Newgenapps kwiprojekthi yethu elandelayo.
Iindleko zezabelo Apptation Inc.
IsiKhokelo esiGqibeleleyo sokuNyusa isiZukulwana esiKhokelayo kunye neeReyithi zokuGuqulela
Jan 12 | Intengiso
Izizathu ezi-4 zokuba kutheni iwebhusayithi yakho ingabekwanga kuGoogle kunye nendlela yokuyilungisa
Jan 6 | Inguqu Digital
Indlela isiqulatho sevidiyo esinokukunceda ngayo wenze iBrand Voice
Jan 4 | ukudalwa komxholo, UkuThengiswa kweMpahla, Inguqu Digital
Joyina uluhlu lwethu lokuposa ukufumana iindaba zamva nje kunye nohlaziyo kwiqela lethu.